मेरो एसएलसी अनुभब – Gulmiews
मेरो एसएलसी अनुभब
७ असार २०७२, सोमबार ००:१६ Raju Gautam
No comments	राजु गौतम
काठमाडौँ । २०५२ सालको माघमा गुल्मी जिल्लाको तुरांग गाबिसको मजुवा बजारमा रहेको ज्ञानोदय माविमा मैले दिएको एसएलसी परिक्षाको रिजल्ट असारमा आउँदा म उपल्ला-खन्न खर्यान् (खरबारी) मा घाँस काट्न गएको थिएँ । घाँसको भारी गोठमा फाल्न भ्याको छैन दौँतरी भाइ विजय चालिसे आयो हस्यांग फस्यांग गर्दै खबर लिएर – “एसएलसीको रिजल्ट आयो रे” । हाम्रो छिमेकी मावली माईलाबा, जसलाई हामी “तारा सर” भनेर भन्छौं, को कानमा सधै रेडियो हुन्थ्यो त्यो बेला, त्यसैले उहाँको छोरा विजयले त्यो खबर लेराको । खासमा ए, बि, सी, डी सिकाको आफ्नो बिद्यार्थी भएको नाताले पनि ‘जा राजुलाइ रिजल्टको खबर भन्दे’ भनेर पठाउनु भाको रे “तारा सर” ले । नपढेकाहरु र जसको आफ्नै घरमा एसएलसी दिएका छोरा-छोरी छैनन् अरु कसैलाई पनि यो रिजल्टको खासै मतलब हुन्थेन । एकैचोटी कतै बाटोमा कसैले रातो अबिर लगाएर हिँडेको देखे मात्र ‘ए फलानोले पास गरेछ..’ भन्थे नत्र त्यति चासो नहुने ।
त्यो बेला एलएलसी पास हुनु भनेको एकदम ठुलै कुरा (साच्चिकै फलामे ढोका) नै थियो, सयले दिँदा मुस्किलले २०/२५ जना पास हुन्थे । एकैचोटीमा पास हुने त राम्रै पढ्नेमा गनिन्थे वा भाग्यमानी मानिन्थे । सात कक्षामा गुल्टीएर सेकेन्ड ईयर पढ्नु परे पछी भने म पनि सुध्रेको अनुभव मैले आफैले मात्र गरेको होइन त्यसपछिका रिजल्टले पनि देखाको थियो । बिषय नलागी पास हुनुलाई “क्लियर” अनि १/२ बिषय लागेर पनि पास गर्ने चलनलाइ “पर्मट्वाट” भन्ने चलन थियो उति बेला हाम्रो तिर । कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परिक्षामा सेक्सन बि बाट एक्लै क्लियर पास भएपछी त सरहरू पनि दङ्ग परेका थिए । पहिलो पटक बस चढेर ठुल्बा-ठुलीआमासंग “वाक्दै-वाक्दै” बुटवल सेन्दिदीकोमा गएर १० दिन बसेर फर्किदा थाहा पाको थिए क्लिअर पास भाको कुरा । सायद त्यो बेला देखि स्कुलमा अझ खास गरेर सरहरूको बिचमा मेरो परिचय परिवर्तन भएको थियो “भागी भागी पौडी खेल्न” जानेबाट “अलिकति पढ्ने” भनेर । क्लियर पास हुँदा सरहरू त दङ्ग थिए भने मेरो त नाक कत्रो भाथ्यो भन्ने कुरो मैले अहिले बर्णन गर्न सक्दिन । परिक्षामा राम्रै गरेको भए पनि कुन्नि किन हो ‘कन्फिडेन्स’ भने पटक्कै नहुने पास होइन्छ भन्ने । रोल नम्बरबाटै मान्छेले थाहा पाउँथे कसले कत्तिको पढ्छ भनेर किन भने हाम्रोमा अघिल्लो कक्षामा प्राप्त गरेको अंक अनुसार रोल नम्बर राखिन्थ्यो, फर्स्ट बोयको १, सेकेन्ड को २ गरेर । कक्षा ९ मा सेक्सन ए मा परेको थिएँ रोल नम्बर पनि जम्मा १९ । कक्षा ८ – सेक्सन ‘बि’ को १०८ बाट एकैचोटी १९ मा पुगेको थिएँ । कता कताबाट फर्स्ट भएर आएकाहरु रमेश, लक्ष्मण, सुरज, दिपेन्द्र लगायतसंग तलतिर-माथ्तिर र संगै एउटा बेन्चमा बस्न पाको थिएँ २ बर्ष सम्म ।
७ बजेको समाचारले नै भनेको रे २०५२ सालको एसएलसीको रिजल्ट त, तर त्यो समाचारले मेरो बारेमा भन्ने कुरै भएन कि म पास भएँ वा फेल । रिजल्ट थाहा पाउने एउटा मात्र उपाय भनेको मजुवा जाने र श्रीकृष्ण दाइ/मुकुन्द/कपिल दाइलाइ फोन गर्ने । चार गाबिसको बिचमा पर्ने मजुवा बजारमा एउटा मात्र फोन थियो र त्यो बेला कमसेकम पनि हाम्रो गाबिसको एसएलसी रिजल्टको पुरै जिम्मा श्रीकृष्ण दाइ लगायत छिमेकी दाइहरु, जो काठमाडौँमा बस्नु हुन्थ्यो, को हुन्थ्यो । पहिले जे जस्तो भए पनि मलाई एसएलसीमा पास हुन्छु भन्नेमा चाहिं कता कता कन्फिडेन्स थियो मसंग, तर डर पनि उत्तिकै । फेरी ९ कक्षा पुगेपछि हल्का राजनीतिले छोएको थियो मलाइ । आर्कै राजनीति मन पराउने सरहरुले त पटक्कै मन नपराउने । हेडसर कृष्ण ज्ञवालीले त राजिनिती गरेकै कारणले मलाइ लेखाको आफुले दिने नम्बरमा सबैलाई भन्दा थोरै नम्बर दिनु भाको थियो (छ), जसले अहिले पनि मेरो एसएलसीको मार्कसिटमा उहाँको अनुहार नकारात्मक रुपले झल्काइदिन्छ । सायद त्यसैले पनि मलाइ डर थियो अलिकति कि मैले राजनीति गरेर मेरो पढाइ पो बिगारेको छु कि भनेर । मजुवा जाने र सिधै फोन गरेर रिजल्ट सोध्ने आँट पटक्कै आएन । अनि उपाय रचें त्यहि बिजयलाइ मजुवा रिजल्ट बुझ्न पठाउने । उ पनि मेरो रिजल्ट सोधिदिन भनेर दौडेर गयो । बर्खा मास त्यति सजिलो थिएन, चिप्लिदै गयो क्यारे भाइ । आफुलाई यता आटो पटक्कै रुचेको होइन त्यो रिजल्ट कुर्दा । झन्डै १ घण्टा पछी विजय आयो हस्यांग-फस्यांग गर्दै, पसिनैसंग आयो मोरो । अहिले सम्म के भाको थियो र मलाइ, बिजयलाइ पल्तिर द्रोणको घरमा देख्दै ढ्यांग्रो ठोक्न थाल्यो मुटुमा अनि पसिना आए । तर तुरुन्त सम्हालिन सक्ने मेरो सानै देखिको बानी, त्यो बेला पनि सम्हालिए । विजय मसंग आइपुग्दा म शान्त भैसकेको थिएँ, उसले पनि कति सजिलै “पास भो रे, सेकेन्ड डिभिजनमा” भन्यो । शान्त भएको म अझ शान्त भएँ, खुसिको सीमै रहेन ।
अब आटो पक्कै रुच्छ, आटो खानु पर्यो र जानु पर्यो मजुवा तिर भन्ने सोचें । कमसेकम पनि चासो दि-दि आफैले फोन गरेर मेरो रिजल्ट बताइदिने दाइ श्रीकृष्ण र काठमाडौँमा रहनेहरुलाइ धन्यबाद दिन मन लाग्यो । एकैछिनमा गएँ मजुवा । थाहा पाउनेले बाटोमै बधाई दिए, “बधाई” शब्द नै प्रयोग गरेर बधाई दिने भन्दा पनि “राम्रो भयो, राम्रो गर्यौ” भनेर वा खुसि ब्यक्त गरिदिएर बधाई दिएको सम्झिन्छु मैले । “बधाई” शब्द त्यति प्रचलित थिएन त्यति बेला, तर सरहरूले चाहिं प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । जम्मा ३६ जनाले परिक्षा दिएकोमा १२ जना मात्र पास रे स्कुलबाट । आफु सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको थाहा पाए पनि आफ्नो प्रतिशत थाहा थिएन तर स्कुलले चाहिं यसपाली ३३% प्रतिशत लेराएछ । अघिल्लो बर्ष त्यो भन्दा थोरै त्यस्तै १८%-२०% कि कति आको थियो रे भन्ने सुनेको थिएँ । ४ जना फर्स्ट, ६ जना सेकेन्ड र बाँकि २ जना थर्ड डिभिजनमा पास भाका थिम । म चाहिं ६ जना मध्ये परेको थिएँ । कसैले त अबिर पनि लगाइदियो बजारमै । अत्यन्त खुसि भएँ, दाइहरुलाई फोन गरें र धन्यवाद ब्यक्त गरें । दाइहरुले सुझाउदै थिए ‘बुवाले कमाउनु भाको छ आइज काठमाडौँ नै पढ्नलाइ’ भनेर । तर मैले विभिन्न कारणले काठमाडौँ आउने मौका पाइन, बुटवल दिदिकोमा बसेर पढ्ने अवसर मिलेको थियो जुन अहिले आएर हेर्दा खासै दुखि हुनु पर्ने देख्दिन । तर परामर्श दिने पढे-लेखेको मान्छे घरमा नभएकोले साइन्स पढ्न पाउने (योग्यता) भएर पनि पढ्न नपाकोमा चाहिं मलाइ अहिले पनि पछुतो लाग्छ । धेरै अंक/प्रतिशत थिएन मेरो जम्मा ५०%, तर त्यो बेला टियुले ५०% लाइ साइन्स पढ्ने दिने कुरा मैले १ बर्ष पछी मात्र थाहा पाको थिएँ ।
पछी आइ-एड बुटवलमा पढिसकेर २०५५ सालमा काठमाडौँ आउदा पनि हाम्रो स्कूल र गाउँको लागि त्यो एसएलसीको रिजल्ट थाहा पाउने बाटो उस्तै नै थियो । त्यसपछिका रिजल्ट आउदा म आफै गोरखापत्र संस्थान धर्मपथमा गएर बिहानै देखि लाइन बसेर, लाठिचार्जमा परेर भए पनि गोरखापत्र लिएर रिजल्टको सूचना पुराउने काम गरेको मलाई ताजै लाग्छ । कुनै बेला थियो हामीले गोरखापत्र लेराएर घरबेटीको फोनमा गाउँबाट फोन गरेर घरबेटी झर्किंदा-रिसाउदा पनि सहेर १/१ गरि खोजेर एसएलसीको रिजल्ट जिल्ला पुराउँथ्यौं । अनि जब इन्टरनेटमा रिजल्ट आउन थाल्यो त्यसपछि म कम्प्युटरको बिषय लिएर पढेकोले र इन्टरनेटको पहुँच पनि भएकोले २/३ बर्ष त हाम्रो स्कुल ज्ञानोदय उच्च माविको रिजल्टको लागि लेजर नै पनि हेरें र सूचना दिएँ । रिजल्ट आउंदै छ रे भन्ने सूचना पहिले नै थाहा हुदा स्कुलबाट सरहरुले स्कुलको कोड नै दिनु हुन्थ्यो सबै जनाको एकैचोटी रिजल्ट हेर्नको लागि । तर समय परिवर्तन भएको छ, गाउँमै इन्टरनेट पुगेको छ । अझ स्कुलमै कम्प्युटर क्लास संचालन भएको छ, इन्टरनेट छ । मैले हिजोका दिनमा जसरी यहाँ रिजल्ट हेर्थें, अहिले आफै सरहरू स्कुलमै हेर्नुहुन्छ । त्यसैले त आज आएर मलाइ थाहा छैन कति जनाले परिक्षा दिएका थिए र कति पास भए । कुनै बेला मैले थाहा पाएर अरुलाई भन्ने म आज आफैले सोधी खोजि गर्दा पनि कसैले भन्दैनन् । त्यति मात्र कहाँ हो र मलाइ एकदम महसुस भएको आर्को कुरा, त्यति बेलाको फर्स्ट डिभिजन र अहिलेकोमा गुणस्तरको हिसाबले आकाश-पातालको फरक छ जस्तो लाग्छ । अहिले साधन-स्रोतले गर्दा पनि होला फर्स्ट हुन निकै सजिलो लाग्छ । ज्ञानको हिसाबले पनि अहिलेका कतिपय फर्स्टहरुसंग भन्दा त्यो बेलाका थर्ड डिभिजन होल्डरहरुसंग धेरै ज्ञान (प्रविधिका बाहेक) छ/थियो । त्यो किन पनि होला भने त्यति बेला मेहनत धेरै गर्नु पर्थ्यो, ९ र १० कक्षाका १२-१४ वटा किताबबाट पढेर एसएलसी परिक्षा दिनु पर्थ्यो ।
यसपटक पनि उत्तीर्ण हुने सबैलाई धेरै धेरै बधाई तथा सुभकामना । अनुत्तीर्ण हुनेहरुलाई पनि धैर्य गर्नु आर्को पटक अबश्य आफ्नो बन्ने छ ।
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०१:५७	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	१५ श्रावण २०७३, शनिबार १७:२८	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	नेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन